मायामा जात, धर्म र बर्ग हेरिनु हुदैन। – News Portal
मायामा जात, धर्म र बर्ग हेरिनु हुदैन।
समाचार डेस्क May 21, 2020
Thakur Prasad Basnet(salyan)
केटी: हाम्रो माया त के गर्नु यस्तै भयोकेटो: हैन! किन, के भयो र प्रिय? (उत्साही हुँदै)
केटी: के हुनु र मेरो अन्त नै बिहे गर्दिन्छु भन्छन् बुबा आमाले।
केटो : होर? तिमिले भनिनौ म कोहि सङ लामो समय देखि प्रेममा छु भनेर?
केटी: भनेको तर मानेनन्, म बुबा आमा सङ को करिब बीस पच्चीस वर्षको सम्बन्ध कसरी तोड्न सक्छु?
केटो: म सङ आयौं भने बुवा आमा सङको सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ तर अनेत्रै बिहे गरेउ भने म सङ को सम्बन्ध सधै सधै को लागि सकिन्छ। त्यसैले कि बुबा आमालाई सहमत गराउ हैन भने करिब एक दशकको हाम्रो प्रेमको दियो निभाउनु हुदैन।
केटी: नाइ भागेर त जादै जान्न अनि सहमत नि गराउनै सकिन।
केटो: के म आउछु त्यसो भए कुरा गर्न।
केटी: हुदैन तिमी न आउ।
केटो: त्यसो भए तिमि मलाई माया गर्दिन रहेछेउ। अर्को बिहे गर्छु।
केटी: हुन्छ, तर मैले तिमिलाई माया त धेरै गर्थे, अहिले पनि गर्छु र पछी पनि गरिरहने छु।
केटो: हो, थाहा भयो! केटी: हो! भगवान कसम माया गर्छु, अर्को जुनि तिम्रो नै हुने छु।
केटो: यो जुनि नभए अर्को जुनिको के कुरा, राम्रो सङ बस्नु तिम्रो जिन्दगी राम्रो सङ बितोस शुभ-कामना। तर कोरोना बढी रहेको छ। तिमिलाइ अनि कोहि कसैलाई कदम कदापि कोरोना लागि हाल्यो भने मलाई भन्नु है म कोरोना को औषधी बनाउदै छु जुन बिश्व भरीनै मेरै औसधि प्रयोगमा आउदै छ। सायद अब म नै बिश्वको सबैभन्दा धनी ब्यक्ति हुनेमा दुइमत छैन।
केटी: होर? मैले तिमि लाई माया गरि नै रहन्छु भनेकी थिए नि। म छोडन नै सकिन अब बिहे गरौं है? जे जे पर्छ, मज्जाले टर्छ।
केटो: मलाई माफ गर मैले अन्तै बिहे गर्दै छु, तिमि त पैसाको लागी पो बिहे गर्न खोज्दै रहेछेउ। बिश्वकै बैज्ञानिकलाई चुनौती दिएको बेला मेरो के सामर्थ्य कोरोना को औसधि पत्ता लगाउने। #Stayhome #staysafe!!!